Duleedka Dhuusamareeb oo ka dhacay Qarax sababay dhimasho & dhaawac - Awdinle Online
Duleedka Dhuusamareeb oo ka dhacay Qarax sababay dhimasho & dhaawac
Qaraxaan oo ahaa Miino loo dhigay Kolonyo Gaadiid dagaal oo ay wateen Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa ka dhacay agagaarka deegaanka Sinna-dhaqo duleedka Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta DG Galmudug.
Inta la xaqiijiyay waxaa dhimatay labo askari halka dhaawac uu soo gaaray 9-kale, waxaana ay saarnaayeen Gaariga Qaraxa uu haleelay sida Mustaqbal ay u sheegeen ilo xog ogaal ah.
Askarta dhaawaca soo gaaray ayaa loo qaaday Isbitaal si loo daweeyo, waxaana howlgal sameeyay ciidamada kale ee la socday Askarta Qaraxa miinada loo dhigay inkasta oo aan la sheegin natiijo kasoo baxday.
Duleedka Magaalada Dhuusamareeb waxaa maalmihii lasoo dhaafay kusoo kordhay qaraxyada Miinada, dhawaan waxaa ka badbaaday saraakiil katirsan Militariga Soomaaliya, waxaana sheegatay Al-Shabaab.
Dhanka kale, dhaq-dhaqaaq ciidan ayaa ka socda deegaannada dhaca duleedka Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta DG Galmudug, maamulka Galmudug ayaa ku hanjabay in ay gacanta ku dhigayaan meelaha ay joogto Al-Shabaab.
Previous articleMadaxweynaha xilka ka dagaya ee Mareykanka oo xilka ka qaaday Xoghayihii Gaashaandhigga
Next articlexubno ka tirsan Al-Shabaab oo gacanta lagu dhigay ka dib howl-gal laga fuliyey waqooyiga Gaalkacyo